Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
musha ASIAN FOOTBALL STORI Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane September 23, 2018
LB inopa Nyaya Yese yeRussia Winger uyo anozivikanwa zvikuru nezita rezita rezita; "2018 World Cup Hero". Our Denis Cheryshev Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati rukurumbira, hupenyu hwemhuri / mhemberero, mhuri yekutanga uye dzakawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwi) pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvezvinangwa zvake paFIFA 2018 World Cup yakaitwa munyika yekwake. Kunyange zvakadaro, vashoma chete vateki vanoziva zvakawanda nezve Denis Cheryshev's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Denis Dmitriyevich Cheryshev akazvarwa musi we 26th-December 1990 muNizhny Novgorod, Russia. Akazvarwa kuna baba vake, Dmitri Cheryshev uyo aive aimbova nhabvu yeRussia uye iye zvino mutungamiriri.
Denis akakurira nehanzvadzi yake duku Dhanila asi akapedza chikamu chikuru chehucheche hwake nebaba vake vanodikanwa, kusiyana nemama vake. Pasi pane mufananidzo wemwanakomana pamwe nababa.
Kubva achiri muduku, Denis aive nechokwadi chokuti aizove mutambi wemutambo mune ramangwana. Denis akatevera netsoka dzababa vake uye akafara zvebhola. Baba vake Dmitri Cheryshev, kune rumwe rutivi, vakabatsira kuisa nheyo dzinodikanwa dzinodiwa kuona mwanakomana wake anodikanwa kuburikidza nehope dzake dzakanga dzisingasviki fantasy. Dmitri baba vake vaimbova mutambo mukurumbira weC FC Dynamo Moscow vasati vaenda kunogara kuEurope. Kugara kwake muEurope kwakakanganisa mhuri yake.
Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Kurarama Spanish
Apo Denis aive nemakore mashanu, baba vake vari mutambi webhola vakagamuchira chipo kubva kuSclub club, Sporting de Gijón. Dmitri akabvuma izvi, akabva kuRussia ndokuenda kuSpain nemhuri yake. Paakagara kuSpain, akaona mutauro unopesana kuti ave nyaya huru uye akatambudza mudzimai wake nevanakomana vake, kunyanya Denis aifanira kunyora muchikoro chebhola. Kuziva kuti zvinokanganisa sei, Denis aifanira kudzidza chiSpanishi nokukurumidza.
Denis muduku aifanira kupinda kuchikoro chekuSpain chaakagadzirira apo akadzidza mutauro wechiSpanishi nemudzidzisi wake.
Pakati pemwedzi yakawanda, akanga asingagoni kunzwisisa izwi muchiSpanish pasina rubatsiro rwemufambi.
Kunyange zvakadaro, imwe nguva gare gare, Denis muduku akazoziva tsika dzechiSpanish uye akadzidza kutaura mutauro weSpain zvinonzwisisika sezvinoitwa nharaunda yemunharaunda.
Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Career BuildUp
Imwe nguva mushure mekudzoka uye kudzidzira chiSpanish, Denis muduku akatanga kupinda kuchikoro chemitambo ye Sporting FC, iyo baba vake vaive vachitamba panguva iyoyo. Akange ari 6 yemakore paakazobatana na Sporting Gijon academy, achigara ipapo kusvikira ari 9.
Denis Cheryshev akakurumidza kutevera baba vake kune kechikwata chake chinotevera, Burgos, kupinda muhurongwa hwehuduku hwavo munguva ye9 mugore reC2000. Mushure memakore maviri ari kutamba kuBurgos, Real Madrid yakadana. Denis Cheryshev akabatanidza Real Madrid sezvaaifungidzirwa sechiremba chakanakisisa munguva yekutongwa kwake. Pasi pane Denis Cheryshev muduku ane rake rekutanga Real Madrid shati.
Denis Cheryshev aiva chikamu che Real Real kwemakore 14, achibatana nekambani panguva ye12. Muchikwata chechidiki, akazviona achikura nokukurumidza kubva kumwana wechiduku kusvika kune munhu mukuru.
Muna 2009, Denis Cheryshev akaputika pachiitiko neB B uye akapfuurira kugovera zvinangwa 22 mumitambo ye109 pasi pekudzidziswa Zinedine Zidane. Kare kumashure, akapiwa se "The Best Shooter muTemal Youth Youth Team. "Nokudaro, akakurudzirwa kuTimal team guru.
Sei Akasiya Madrid? Denis Cheryshev akafananidzirwa pasi apa akatamba chete mechipiri mechikwata chevarume ve Real Real kare akatanga kutonhora bhenchi nekuda kwekukwikwidza kwakasimba pakati pevatambi vakuru uye vaduku. Pasi pane Denis Cheryshev ne Real Real Senior Team.
Mushure mokurwadziwa kwekuonekwa kwe zero kwemwedzi, Denis akakanganiswa nekambani. Mukutengesa kutanga uye kukura kwechipiri, Real Madrid, zvinosuruvarisa, akarasikirwa nechechi Cheryshev. Chikumbiro chaDenis kusiya chikwata chakarambidzwa, achibva amusiya nechisarudzo chechikwereti.
Denis akawana nzira yake kune zvikwereti makumi matatu zvakaonekwa Sevilla, Villarreal naValencia. Akazopedzisira abatana naVillarreal mushure mekuisa chisimbiso chekugadzirisa zvachose mu2016.
Russia 2018 World Cup Fame: Denis Cheryshev akakurumbira paakaputika muZimbabwe Cup FIFA 2018. Pasina kunyora zvizhinji, kumukira kwake mukurumbira kunopfupikiswa mumufananidzo uri pasi apa.
Vamwe vose, sezvavaizoti, ikozvino nhoroondo.
Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Hongu, angave asina kufanana saiye Fyodor Smolov akafananidzirwa kumusoro neaimbova mudzimai wake, asi Denis Cheryshev anonyatsopinda muhuwandu hweVHNUMX vanoda zvemitambo yeRussia uye tinokupai chikonzero cheizvi. Izvozvi hazviwanikwi nekuda kwekushanda kwake muRussia 10 FIFA World Cup, asi nekuda kwemafungiro ake eEurope. Ichokwadi ndechokuti, vasikana, vanokoshesa pfungwa dzake dzeEurope 'dzeEurope nekuda kwekuti iye achiri kuchikoro panguva yekunyora.
Kutaura pamusoro pezvaanoda, mudzimai mumwe chete ndiye anosangana naDenis '. Haasi mumwe kunze Cristina Cobo inoratidzwa pasi apa nemurume wake. Cristina naDenis vave vari muukama hwavo kubva ku2016.
Uyu musikana anoshamisa uye musikana weRussia akanaka waDenis Cheryshev vakadzidza kuMadre Ventura Sagrado Corazon Castellon uye Yunivhesiti yeWest yeScotland asati adzidzira kuUniteditat de Valencia apo akasangana nemurume wake. Hanzvadzi yake yakanaka twese Maria uye amai vake iye zvino vanogara muSpan.
Sezvakanyorwa pakunyora, Cristina aripo iye zvino gweta rinoshanda paArenal Sound muBorana, guta riri kumabvazuva kweSpain.
Denis anofarira kuramba achibudisa mapikicha emusikana wake, Cristina Cobo pa Instagram rake. Zvisinei, Denis akanga asina kupa chero zvataurwa munguva pfupi yezvirongwa zvenguva yemberi yaCristina.
Denis Cheryshev Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts -Family Background
Mhuri yaDenis Cheryshev haisi iyo yakafanana yeRussia iyo inowanzo iyo inokwidza imba uye vasingadi kubuda kunze kwenzvimbo yavo yekunyaradza kuti vatange matambudziko matsva kune dzimwe nyika.
Denis Cheryshev ndeyemhuri iyoyo iyo inofanirwa kuenderana nekutenda kuti inogona kubudirira mune dzimwe nyika kunze kweRussia. Denis Cheryshev anotanga kubva kuna amai vake, baba, mukoma, hanzvadzi, babamunini, aunty uye dzimwe hama dzose dzakadzidza kuti dzive dzakasununguka nehurumende yeRussia.
Kuita kuti kutenda ikoko kuvepo, kunyange baba vaDenis, Dmitri Cheryshev akabvisa pabasa rake rebasa pasina pasina mubvunzo kuti azvitsvene mukusimudzirwa kwemwanakomana wake mumutambo sezvakaona mumufananidzo uri pasi apa.
Chinangwa chacho chaiva chokumuchengetedza kuti arege kugara kumba. Pane imwe nguva, baba vaDenis vakasarudza kuva mutevedzeri webhola. Ichi chisarudzo chababa vake chaibatsira basa raDenis. Pasi pane mufananidzo waDmitri semutungamiriri.
Sezvo panosvika mhuri yaDenis Cheryshev, nguva yavo yekupedzisira yekumirira kubwinya inopera. Denis 'anoratidza kuRussia 2018 World Cup zvechokwadi akaunza kuchinja kwebasa rake, hupenyu hwehupenyu uye mukurumbira wemhuri.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Dheis Cheryshev Childhood Indaba yedu pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Cenk Tosun Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Aleksandr Golovin Urubhabhatidzo Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Roman Abramovich Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Fyodor Smolov Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Aleksandr Kokorin Utano Hwokupedzisira Plus Untold Biography Facts
Henrikh Mkhitaryan Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 22, 2018
Ryo Miyaichi Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Arda Turan Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Chikunguru 23, 2018
Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 9, 2020
Park Ji Sung Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Zvita 28, 2018